ट्रम्पलाई पछि पार्दै मोदी बने दुनियाँका सबैभन्दा शक्तिशाली नेता - Nepal Insider
Home/राजनीति/ट्रम्पलाई पछि पार्दै मोदी बने दुनियाँका सबैभन्दा शक्तिशाली नेता
ट्रम्पलाई पछि पार्दै मोदी बने दुनियाँका सबैभन्दा शक्तिशाली नेता
नयाँदिल्ली । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई पछि पार्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुनियाँका सबैभन्दा शक्तिशाली नेता बनेका छन् ।बेलायतको ब्रिटिश हेराल्डको एक सर्वेक्षणमा पाठकहरुको भोटको आधारमा तयार पारेको रिपोर्टमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ । उनी रूसी राष्ट्रपति पुटिन, चिनियाँ राष्ट्रपति शी जिनपिङ्ग समेत दिग्गज नेताहरु जितेर सबैभन्दा शक्तिशाली बनेका हुन् । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस । नेपाल, भारतलगायत एसियाली तथा यूरोप र अमेरिकामा पनि योगद दिवस मनाइएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सँयुक्त राष्ट्र संघमा योग दिवस मनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि जून २१ लाई योग दिवसका रुपमा मनाउने निर्णय भएको थियो।शुक्रबार पाँचौं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ट्वीट गरे योगबारे चर्चा गरे। प्र धानमन्त्री ओलीको ट्वीटमा जवाफ आयो भारतबाट त्यो पनि नेपाली भाषामा । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपालीमै ट्वीट गरेर जवाफ दिएका हुन् । उनले लेखेका छन्, ‘योगको विशिष्टतालाई उजागर गर्नुका साथै व्यक्तिगत रुपमा उप स्थित भई योग दिवस कार्यक्रमलाई सुशोभित गर्नु भएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीज्यूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।’
यसमा अधिक मात्रामा फाइबर हुने भएकोले यसले हाम्रो पाचनलाई राम्रो बनाउँछ र लिवरको कार्य क्षमतालाई पनि बढाउँछ। यसको लागि मुलाको पातलाई राम्ररी पखालेर जुस बनाउने। यो जुसलाई हरेक दिन खाना खाए पछी पिउने। यो जुस लगातार ६/७ दिन सम्म पिउनले लिवरसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याहरुलाई हटाउँछ।३. किसमिसको पानी: करिब ५०० एम एल पानीमा एक कचौरा किसमिस रातभरी भिजाएर राख्ने। बिहान पानीलाई छान्ने र यस पानीलाई बिहान खाली पेटमा थोरै पिउने । साथै पुरै दिन एक एक घण्टाको अन्तरालमा यस किसमिसको पानी थोरै थोरै गर्दै पिउने। त्यस्तै भिजेको किसमिस लाई बिहान खाजाको साथ वा बेलुका सेवन गर्न सकिन्छ। लगातार ३ दिन सम्म किसमिसको पानी खानाले लिवर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या बिस्तारै हट्छ र लिवर स्वस्थ हुन्छ।४. गहुँको जुस: गहुँमा क्लोरोफिलको मात्रा अधिक हुन्छ।
साथै यो एक शक्तिवर्द्वक एन्टीअक्सिडेन्ट हो। गहुँको जुसको सेवनले लिवर सम्बन्धी सम्पूर्ण बिमारीलाई दुर गराउँछ। गहुँको जुस जुनसुकै आयुर्वेदिक पसलहरुमा किन्न पाइन्छ। यी साधारण घरेलु चीज वा उपचार विधिले लिवर सम्बन्धी सम्पूर्ण खराबी वा बिमारीलाई संधैको लागि हटाई लिवरलाई स्वास्थ्य र स्वच्छ बनाउँछ। एजेन्सीगर्भ रहे नरहेको थाहा पाउने पाँचओटा लक्षणहुनत आजभोलि गर्भवती भए नभएको कुरा पत्ता लगाउने अनेक उपाय छन् । प्रेग्नेन्सी टेस्ट किट प्रयोग गरेर गर्भ यकिन गर्न सकिन्छ । तर कतिपय अवस्थामा यस्ता परीक्षण गर्ने विधीहरु सर्वसुलभ हुँदैनन् । यस्तो बेला कसरी थाहा पाउने आफू गर्भवती भएको कुरा ? आउनुस् जानौं पाच ओटा तरिका ।१. तपाईं अन्तिम पटक महिनावारी भएको कुरा याद गर्नुहोस् । यदि नियमित महिनावारी हुने गर्नु भएको छ भने तपाईंको महीनावारी हुने दिन नाघिसक्दा पनि महिनावारी हुनु भएन भने तपाईं गर्भवती हुनु भएको छ । २. स्तनको आकारमा परिवर्तन देखिन सक्छ ।
छातिमा हात राखेर सोच्नुस् सरकारले जे सुधार्न खोजेपनि आन्दोलन गर्ने तपाईका नातीले धिक्कार्नेछ
किन कारबाही सिफारिसमा परे पर्यटनमन्त्री अधिकारी ?